Lix arrin oo la go’aamin doono marka uu horyaalka Premier League-ga soo laabto – Gool FM
Lix arrin oo la go’aamin doono marka uu horyaalka Premier League-ga soo laabto
Dajiye March 20, 2020
(England) 20 Mar 2020. Maadaama uu weli sii faafayo caabuqa Coronavirus, horyaalka Premier League-ga ayaa la sugi doonaa illaa dhammaadka bisha April inuu kasoo laabto xannibaadda, balse marka uu horyaalka dib u furmo waxaa jiro dhowr arrin oo ugu dambeyn dhinac u dhici doona.
Haddaba halkan hoose ayaan ku faaqidi doonnaa arrimaha u baahan in go’aan laga gaaro marka dib loo ciyaaro horyaalka Ingiriiska.
In Liverpool ay hanato koobka horyaalka:
Ka hor inta uusan horyaalka Ingiriiska gelin xannibaadda loogaga hor tagayo inuu faafo Coronavirus, Liverpool ayaa hooggaanka horyaalka ku heysay 25 dhibcood oo nadiif ah, taasoo ka dhigan inay tahay kooxda la sugayo inuu loo caleemo saaro horyaalnimada xilli ciyaareedkan.
Inkastoo ay farqi dhibco badan ay ku hayaan hooggaanka, haddana su’aal ayaa weli ku qotonta in koobka horyaalka la siiyo, maadaama tirada dhibcaha iyo kullamada harsan marka la eego aanan xisaabta laga saari karin Manchester City oo soo qaban karto.
Kama hadleyno suuro galnimada iyo inaysan suuro gal ahayn, balse tirada dhibcaha iyo kullamada harsan marka la xisaabiyo, Reds waxay u baahantahay Lix dhibcood oo dheerri ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la rajeynayaa inay dooddaas meesha ka bixi doonto marba haddii horyaalka dib loo baaso, waxaana xusid mudan kooxda Jurgen Klopp inay u baahantahay laba guul si loogu caleemo saaro horyaalnimada Ingiriiska xilli ciyaareedkan.
Xayiraadda xilligeeda lasii fogeeyay ayaa ka dhigan in Liverpool ay u baaqanayaan lix kullan oo ay la kala ciyaari lahayd Crystal Palace, Everton, Man City, Aston Villa, Brighton iyo Burnley.
Kullamadaas jadwal-ciyaareedkooda ayaa la filayaa in dib loo dejin doono, hase ahaatee, Reds ayaa 2-da May la ciyaareyso Arsenal ka hor inta aysan ka hor tagin Chelsea iyo Newcastle.
Haddii ay ka adkaato kooxaha London ka dhisan, Liverpool waxay u dabaal degi doontaa horyaalka Premier League-ga ka hor inta aysan booqan St James’ Park maalinta ugu dambeysa xilli ciyaareedkan.
Klopp kooxdiisa ayaa sidoo kale maanka ku heyso inay jebiyaan rikoorkii Man City ay ku qaadday horyaalka 100 dhibcood xilli ciyaareedkii 2017-18.
Loollanka Champions League:
Liverpool ayaa horraan booskeeda Champions League-ga ee xilli ciyaareedka dambe adkeysatay, si la mid ah Man City ayaa u muuqata mid iyaduna booskeeda xajisatay halka Leicester City ay iyaduna u badantahay in fasal ciyaareedka xiga ay ka qayb geli doonto koobka horyaallada Yurub.
Dagaalka ugu adaga ee booska afraad ayaa ah mid xiiso gaar ah leh, maadaama farqi siddeed dhibcood ah uu u dhexeeyo boosaska afraad iyo sagaalaad.
Chelsea ayaa hadda ku fadhisa kursiga afraad iyagoo heysta 48 dhibcood, balse Frank Lampard kooxdiisa ayaa wajaheysa cadaadis xooggan, maadaam Manchester United ay sameyneyso sare u kac xawli ah, suuro galna ka dhigeysa inay booska kala baxdo.
Red Devils ayaa saddex dhibcood oo qura ka dambeysa Blues, waxaana xisaabta lagu dari doonaa Wolves iyo Sheffield United, kuwaasoo min 43 dhibcood heysta.
Kooxaha wuqooyiga London ka dhisan ee Arsenal iyo Tottenham ayaa iyaguna si tartiib ah usoo rucleynaya in kastoo ay u muuqdaan kuwa aanan lahayn hammi weyn oo ku aaddan usoo bixitaanka Champions League-ga xilli ciyaareedka dambe.
Halkaas kuma eka loollanka ee Man City ayaa jawaab ka sugeysa racfaan ay ka gudbiyeen ganaaxii ay UEFA ka saartay tartamada Europe, haddii kooxda Pep Guardiola ku guuldarreysato racfaankaas, waxaa jirta fursad ah in kooxda booska shanaad ay heli karto ka qayb galka koobka horyaallada Yurub sanad ciyaareedka xiga.
Racfaanka City ay ka qaadaneyso ganaaxii UEFA:
Inkastoo Man City ay u muuqato mid ku dhammeysaneysa booska labaad ee kala sarreysan horyaalka Ingiriiska, haddana weli ka qayb galkooda xilli ciyaareedka xiga ee Champions League waa mid aan hubanti ahay.
Kooxda horyaalka Premier League-ga difaacaneysa ayaa luqunta loo suray ganaax laba sano ah oo tartamada Yurub laga ganaaxay, si la mid ah 30 milyan oo euro ka dib markii ay jebiyeen xeerka dhaqaale wanaagga.
City ayaa weli ku doodeysa inaysan jirin eedeymaha loo soo jeediyay, waxaana dukumiintiyaal u gudbisay maxkamadda ugu sarreysa ciyaara dhammaadka bishii February.
Madaxa fulinta kooxda Man City, Ferran Soriano ayaa sheegay inay u baahanyihiin xal degdeg ah iyo dacwadooda la dhageysto xagaaga horraantiisa.
Hase ahaatee, waxaa la fahansanyahay in dacwadan qabashadeeda ay dib u dhici doonto, maadaama maxkamadda ciyaaraha ugu sarreysa ee CAS horraan dib u dhigtay illaa saddex kiis ka dib faafitaanka coronavirus.
Baaqi ku ahaanshaha horyaalka:
Haddii ay jiraan kooxo u dagaallamaya boosaska loogu soo baxo tartamada Yurub, sidoo kale waxaa jira kooxo dagaal ugu jira inay sii joogaan horyaalka heerka koowaad.
Inkastoo kooxda Norwich City ay adagtahay inay ka badbaaddo u laabashada horyaalka heerka labaad , maadaama ay 21 dhibcood keliya heystaan, lix dhibcoodna ay u jiraan halka ay ku badbaadi lahaayeen, misena doodda taagan ayaa ah kooxdee garabka ka qaban doonto oo u raaceysa heerka labaad.
Aston Villa oo 25 dhibcood leh, kuna jirta booska labaad ee ugu hooseeya ayaa afar dhibcood u jirta booska 15-aad kooxda ku jirta ee Brighton oo kullan baaqi ah heysata.
Waxa dagaalka xiisaha u yeellaya ayaa ah in kooxaha West Ham, Watford iyo Bournemouth ay ku kala sarreeyaan keliya farqiga goolasha iyagoo wadaaga min 27 dhibcood.
Burnley oo rikoor gaar ah isha ku heyso:
Bilawgii sanadkan, Burnley uma aysan muuqan mid ka badbaadi karta u laabashada horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska, balse kooxda Sean Dyche ayaa lasoo baxday miciyo xooggan iyo bandhig la yaab leh.
Kooxda lagu naaneyso Clarets ayaa hadda ku jirta booska 10-aad ee Premier League-ga ka dib toddobo kullan oo aan dhinaceeda dhulka la dhigin, afar ka mid ahna ay guuleysteen, waxaana ay hadda heystaan 39 dhibcood, iyagoo dagaal ugu jira in fasal ciyaareedka dambe ay ciyaaraan koobka Europa League-ga.
Haddii ay 15 dhibcood ka helaan sagaalka ciyaarood ee harsan, waxay bareejeyn doonaan rikoorkooda Premier League-ga ugu fiican ee ah in 54 dhibcood ay shaqeystaan, waxaana dhibcahaas ay shaqeysteen 2018.
Loollanka kabta dahabka:
Loollanka loogu jiro gooldhalinta horyaalka Premier League-ga ayaa leh xiiso gaar ah, iyadoo hadda Leicester City weeraryahankeeda Jamie Vardy uu ku hooggaaminayo 19 gool, ka dib markii uu laba gool ka dhaliyay Aston Villa muddo uu abaar ku jiray ka dib.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ciddiyaha ku dagaallamay, isagoo xilli ciyaareed kale oo cajiib ah ku jira, maadaama uu xisaabsanayo 17 gool fasal ciyaareedkan.
Kabtanka Arsenal ayaa doonaya inuu markii labaad oo xiriir ah uu helo kabta dahabka, ka dib xilli ciyaareedkii hore oo uu la wadaagay xiddigaha Liverpool ee Mohamed Salah iyo Sadio Mane.
Salah ayaa sidoo kale loollanka kabta dahabka ku jira waxaana min 16 gool ay tirsanayaan weeraryahanka Manchester City ee Segio Aguero.
Halyey kooxda Liverpool ah oo ku baaqay in Paul Pogba uu ka tago Manchester United
“Saalax iyo Mane kuma biiri doonaan Real Madrid ama Barcelona” – McManaman